နေပြည်တော်သမ္မတ အိမ်တော်ဝင်း အစည်းအဝေးခန်းမ မှာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံရေး ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကို တက်ရောက်လာတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြစဉ်
တွေ့ဆုံပွဲအပေါ် သုံးသပ်သူတွေရဲ့ အမြင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အပြင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင် ထိပ်သီးခေါင်းဆောင် ၁၄ ဦးဟာ နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တော်မှာ ဒီနေ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ အားလုံးကလက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
"ဖြစ်နိုင်ရင် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အကုန်ပိုင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အစပိုင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်၊ အထူးသဖြင့် အဲဒီ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံမူဘောင်များကို ချမှတ်နိုင်မှသာလျှင် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာ မည်သူပဲတာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အစိုးရကပဲ တာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကို ဆက်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်"
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကို လွှတ်တော်တွင်းက ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက် ပွဲ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက် အစိုးရ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ သတင်း မီဒီယာတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့စတာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ထိပ်သီး ၁၄ ဦးရဲ့ ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဆွေ၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသိန်းထွန်းနဲ့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဌေးဦး စတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဆွေကို RFA သတင်းထောက် မဝေမာထွန်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တွေ့ဆုံပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပြောကြားချက်တွေကို ကိုသီဟထွန်းတင်ပြထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကို မသင်းသီရိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တဆက်တည်း ဒီတွေ့ဆုံပွဲအပေါ် သုံးသပ်သူတွေရဲ့ အမြင်တွေကို RFA အဖွဲ့သား ကိုနေရိန်ကျော် တင်ပြထားတာကိုလည်း နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
THE ESSENCE OF DEMOCRACY SYSTEM IS TO MAKE ALL AGREEMENTS, DECISIONS AND ACTIONS ARE BASED ON THE PEOPLE AND PEOPLES WILL. THEREFORE SHOULD NOT MAKE AGREEMENTS, DECISIONS AND ACTIONS IN BETWEEN4PERSONS OR 14 GROUPS OR 100
GROUPS BECAUSE THEY ALL DO NOT HAVE AUTHORITY.
SOME AGREEMENTS AND DECISIONS CAN MAKE BY HLUTTAWS AND THE ADMINISTRATION BUT SO MANY
IMPORTANT DECISIONS MUST BE MADE BY GENERAL PUBLIC VOTES.
PEOPLE, GROUPS ETC CAN MEET AND TALK FOR FRIENDSHIP AND GOOD RELATIONSHIP.
Nov 02, 2014 04:04 AM
မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီး ၊ တွေ့ဆုံပွဲ သေးသေး ။
ကြီး -၁၄-ကြီး တွေ့ဆုံပွဲကတော့ ပြီးသွားပြီ ။
ကြီး -၁၄-ကြီးဆိုတာ တမင် ရွဲ့ခေါ်ကြည့်တာပါ ။
တကယ်မကြီးပဲ ကြီးသယောင် အချို့ကို ဂုဏ်တင်ပေးထားသလားကတော့ ၊ စီစဉ်သူတွေပဲ သိကြမှာပါ ။
(၁) တွေ့ဆုံပွဲက - အလောသုံးဆယ် မဟုတ်သည့်တိုင် ၊ လူထုဆီက အမြင်နဲ့
မျှော်လင့်ချက်တွေကို အလေးထားတယ် ၊ public in-put တွေအတွက်
အချိန်ပေးထားတယ်လို့ မြင်စရာသိပ်မရှိဘူး ။ ၂၀၁၅ မတိုင်မီ
တွေ့ကြတယ်ဆိုပေမယ့် ၊ အချိန်အကြာကြီးယူရတဲ့ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း
ဖလှယ်မှုမျိုးအတွက်တော့ အတော်တောင် နောက်ကျနေပြီလို့ ပြောနိုင်တယ် ။
'စေတနာသန့်သန့်' ဆိုတာထက် ၊ "အသုံးချတာ"လို့ မြင်ဖို့ဖက်က အားသာတယ် ။
Nov 01, 2014 04:35 PM
ဦးသိန်းစိန်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ က သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေထဲက ယာယီထွက်ပေါက်ရှာ လိုတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ထုနဲ့ထည်နဲ့ဖြစ်တည်လာတဲ့ (ပြည်တွင်း စစ် ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စတဲ့) ပြည်သူလူထုဆန္ဒကို လမ်းကြောင်းပြောင်းဖြိုခွဲ လိုတဲ့အခါမှာ ပဲဖြစ်ဖြစ် “ဟန်ပြတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ” တွေဖော် ထုတ်လေ့၊ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါ တယ်။ “၁၀ မိနစ်စကားပြောပွဲ” ဟာလည်း အဲဒီလို “ဟန်ပြတွေ” ထဲမှ ခပ်ညံ့ညံ့အမျိုးအစားတစ်ခုမျှသာဖြစ် ပါတယ်
Nov 01, 2014 01:01 PM
U Ye Htet, the meeting is held because Mr. Obama is coming to Burma. If the government had the genuine desire to start the all-inclusive meeting, it should have been held even at the beginning of this administration. Now, it is too late and every Burmese citizen who hasafull lump in his or her skull knows it very well.
No Brainer. You understand it. I understand it. Even six-months-old can understand it. Har Har! Sate Phwar.